Somaliland.Org » “Waxaan xukuumadda ka codsanayaa inay isticmaasho xukunka dilka ah”…Eng Faysal Cali Waraabe
“Waxaan xukuumadda ka codsanayaa inay isticmaasho xukunka dilka ah”…Eng Faysal Cali Waraabe
November 29th, 2008 Comments Off Hargeysa(Somaliland.Org) Xisbiyada Mucaaradka ah ee Somaliland KULMIYE iyo UCID ayaa soo dhaweeyay natiijada hordhaca ah ee xukuumadu ka soo saartay baadhista cidii ka danbeysay qaraxyadii sadexanka ahaa ee 29-kii October laga fuliyay magaalada Hargeysa.
Guddoomiyaha xisbiga Mucaaradka ah ee UCID Eng; Faysal Cali Waraabe iyo Gudoomiye ku xigeenka koobaad ee Xisbiga KULMIYE Muuse Biixi Cabdi oo xalay wargeyska Ogaal xog-waraysiyo kala gaar ah mid kasta goonidiisa ula yeeshay waxa kale oo ay kaga hadleen warar maalmihii ugu danbeeyay soo baxay oo sheegayay in xukuumadu ka cagajiiday qodobo ka mid ahaa heshiis Xisbiyadu gaadheen markii Madaxweyne Rayaale ay ka dhamaatay Mudadii xilka loo soo doortay bishii May ee aynu soo dhaafnay, kaasoo sheegayay in la sameeyo Guddi wada jir ah oo ka shaqaysa dhiirigelinta diiwaan-gelinta iyo doorashooyinka.
Gudigaasi oo aan ilaa hada la sameynin, Islamarkaana la sheegay in Xukuumada iyo Xisbiyada mucaaradka ahi isku maandhaafsan-yihiin.
Eng; Faysal Cali Waraabe oo xalay Ogaal wax ka waydiiyay ugu horeyn sida UCID ahaan ay u arkaan faah-faahinta Wasaarada Arrimaha gudaha Somaliland ka bixisay baadhista weeraradii sadexanka ahaa,waxa uu yidhi, “Xisbi ahaan waanu soo dhawaynaynaa.
Guul weeye mar haddii cidii wax ina yeeshay la soo saaray oo farta nayloogu fiiqay. Sababtoo ah, mar haddii aynu cadowgeena ogaanay waa in aynu u tabaabulshaysanaa sidii aynu iskaga celin lahayn.
Laakiin, dawladda waxa laga rabaa inay si dhakhso ah kiiska Maxkmadda u keento, cadaymahana la keeno, ciddii arrintan gacan ka geysatay ee reer Somaliland-na, iyada oo aan la shirkiyaynayn waa in Ciqaab la tusaa, waxaanan dawladda ka codsanayaa inay Xukunkii dilka ahaa isticmaasho oo ay xukunka khafiifka ah ka dayso.
Sida ay Diinteenu (Islaamka) sheegayso, qofkii dila qof Islaam ah oo aan waxba u geysan, dil buu mutaystay waana in la dilaa. Sidaa darteed, waxaanu hambalyaynaynaa in muddo bil ka yar ay ku soo saareen cadowgii ina soo weeraray.” Sidaas ayuu yidhi Guddoomiyaha xisbiga UCID.
Wax la waydiiyay inay haboonayd in xukuumadu tafaasiil intaa ka badan ka bixiso cidii arrintaa fulisay oo ay ku jiraan magacyada dadkii is miidaamiyay, waxa uu ku jawaabay, “Horta dhowr waxyaabood baynu u baahnayn.
Marka koowaad, cadowgu waa ayo, xagee laga soo abaabulay iyo yaa soo abaabulay? Taas waynu haynaa oo waxay inoo sheegeen halkii laga soo abaabulay iyo cidda soo abaabushay, dadkii is qarxiyayna laba way inoo hayaan, afarta hadhayna waxa la ogyahay in aanay reer Somaliland ahayne ay Soomaaliya yihiin.
Laakiin, waxaan filayaa in magacyada la heli doono, waxaanan dareensanahay dadkeenan la adeegsaday ee gudaha jooga in dadkaa dibadda ka yimi ay xataa magacyo khalad ah siiyaan.
Kolay baadhistii way socotaa, laakiin waxa cadaatay oo Ilaahay mahadii ah in qof qudhi reer Somaliland (dadkaa isqarxiyay) ahaa, kuwa xun-xun ee baxsaday ee reer Somaliland ah ee gacanta s